Curragh Racecourse - n'ime obodo
Agụụ Irish maka ịgba ịnyịnya bụ akụkọ ifo na ịhụ ya na Curragh bụ ihe a na -agaghị echefu echefu. Ndị ọkachamara n'ịgba ịnyịnya bụ ndị nwere mmasị na ịhụnanya maka ịnyịnya ọma. Ịgba ịnyịnya dị n'ọbara ha. Bịa nwee ọ enjoyụ otu ụbọchị n'ọsọ egwuregwu ma nwee egwuregwu klaasị ụwa na ọnọdụ dị ebube na mbara ala Curragh ebe ịgba ịnyịnya na ịnyịnya bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị ruo ọtụtụ narị afọ. Ihe ọhụrụ Curragh grandstand mepere na 2019 ma bụrụ ụlọ ọrụ klaasị nwere ọkwa nkasi obi yana ahụmịhe ndị ahịa karịa ụlọ nkwari akụ dị elu karịa ebe egwuregwu. Ịgba ịnyịnya bụ egwuregwu kacha amasị mmadụ na ezinụlọ, ụmụaka na-erubeghị afọ 18 na-aga n'efu. Gaa na webụsaịtị Curragh Racecourse taa wee debe ụbọchị na -esote gị na agbụrụ. www.curragh.ie
Ebe Curragh Racecourse & Ala Ọzụzụ
Curragh Racecourse arụ ọrụ dị mkpa na ndụ kwa ụbọchị na acres 2,000 pụrụ iche nke Curragh Plains ruo ọtụtụ narị afọ. The Curragh Plains nwere ebe ịnyịnya ịnyịnya 1,000 na -azụ ọzụzụ n'ụlọ ebe anụ ụlọ dị gburugburu ebe ọzụzụ atọ dị iche iche. Curragh bụ ebe agbụrụ dị larịị ise kachasị mkpa na Ireland kwa afọ nke a na -akpọ mkpokọta. Irish Derby, nke mbụ na -agba na 5, bụ isi ihe dị na oge ịgba ọsọ Curragh ma na -agba na Satọde ikpeazụ n'ọnwa June n'afọ ọ bụla. Nnukwu mmemme na egwuregwu, Irish Derby bụ ụbọchị a na -agaghị echefu. Usoro Curragh na -amalite nzukọ site na Machị ruo Ọktọba n'afọ ọ bụla. Maka ozi ndị ọzọ, lelee weebụsaịtị Curragh.
N'azụ Mpaghara Njegharị
Curragh Racecourse nwere obi ụtọ ikwuwapụta na n'oge na -adịghị anya ha ga -eburu akwụkwọ ntanetị maka njem nlegharị anya nke nnukwu ụlọ na ogige. Ị ga -aga eleta ebe ndị na -adịghị asọpụrụ ọha na eze na ụbọchị ịgba ọsọ, dị ka ụlọ na -agbanwe jockeys, ụlọ ntu na mbara ihu VIP dị elu na -ele anya na mbara ala Curragh. Maka ozi ndị ọzọ biko gaa na: Curragh Racecourse - N'azụ nlegharị anya njegharị
Akụkọ & Ihe Nketa
Ịgba ịnyịnya na ịnyịnya nke ọma abụrụla akụkụ dị mkpa nke ọmarịcha ọmarịcha ọzara Curragh ruo ọtụtụ narị afọ na mmalite nke aha ebe na -egosi na Curragh bụ ebe a họọrọ maka ịgba ịnyịnya na -alaghachi azụ ọtụtụ puku afọ. The Curragh Plains nwere obosara na omimi nke akụkọ ihe mere eme ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na Ireland. Gini mere ị gaghị achọpụta n'onwe gị akụkọ a? Ma mmasị gị bụ nkà mmụta ihe ochie ma ọ bụ agha, ịkọ ugbo, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkọ egwuregwu, Curragh Plains nwere akụkọ na -atọ ụtọ ịkọ na njem site na akụkọ ndị a na -akọwa etu ihe mkpuchi ndụ na ọrụ na Curragh siri nọgide na -ama jijiji site na akụkọ ihe mere eme mbụ ama ama. ruo taa.
Adventure & Ihe, Onye na-agba ịnyịnya Kildare, Newbridge
Newbridge, Obodo Kildare, R56 RR67, Ireland.